Offọdụ ụlọ ọrụ m na-arụkọ ọrụ, ọkachasị azụmaahịa azụmaahịa (B2B) na-ahụ ụfọdụ nsonaazụ dị ịtụnanya wee laghachi na itinye ego na ihe eji eme ihe ngosi na azụmaahịa. Anọ m na-achọ biputere banyere mebere omume ahịa ruo oge ụfọdụ, na-adịbeghị anya wee na-agwa okwu Ikpe na-ezighi ezi, na-eduga mebere omume, mebere tradeshow na online ọrụ ngosi na-eweta online.
Unisfair na-enye ngụkọta ngwanrọ dị ka ikpo okwu Ọrụ, gụnyere software nke ogbako, sọftụwia weebụ, nkata n'ịntanetị, nchịkọta ndu na akuko akụkọ. N'adịghị ka ogbako ọdịnala ebe ọ na-esiri ike ịchụ ndị bịara, nzukọ ọgbakọ na-enye gị ohere ịgbaso ihe niile! Na mgbakwunye na ọnụego mbelata mbu, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewere nzukọ ndị mebere iji na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Ariba bụ otu nke Unisfair's akụkọ ọma. Ariba bụ ụlọ ọrụ njikwa ụwa nke ghọtara na akụ na ụba ga-emetụta ndị mmadụ na-aga nzukọ ha ọzọ. N'iji ikpo okwu nke Unisfair, ha kpaliri ogbako ha na ntanetị ma rite uru dị ukwuu, na-ebute ndị na-edebanye aha 2,900, ndị bịara 1,618, nbudata 4,000, nleta ụlọ 5,200, mkparịta ụka 538 bidoro na ozi 1,078! Nke ahụ bụ njikọ dị mma!
Fọdụ ndị egwuregwu ndị ọzọ n'ahịa dị InXpo, ON24, Ngosipụta2, Ebe nke abụọ na 6Connex. Adịghị m njikere ịhapụ ihe omume anụ ahụ - achọpụtara m uru bara ụba na ịkparịta ụka n'withntanet na ndị ọzọ bịara. Ebe ọ bụ na ọnụahịa ogbako nwere ike ịmalite na $ 50k, agbanyeghị, ogbako mebere kwesịrị. You're ga-adọta ọtụtụ mmadụ ndị nwere nnukwu atụmanya mana na-ezere ọnụ ahịa ma ọ bụ nsogbu nke njem.